METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel par APTICMAD - Fichier PDF
METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE Tsiky Marcel .pdf
Nom original: METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel.pdfAuteur: APTICMAD
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2017 à 10:44, depuis l'adresse IP 197.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3292 fois.
MÉTHODOLOGIE POUR UNE BONNE DISSERTATION PHILOSOPHIQUE AU BACCALAURÉAT
Proposée par Fr RASOLONDRAIBE Tsiky Marcel
esorina daholo izay rehetra tsy manome fahafahana, izay
maneritery mba tsy hisy geja mamatopatotra. Asiana ohatra
hanazavana izany ary tsara raha asiana tenina mpandinika hafa
Mba ho tsara ny « dissertation » dia mila mampiasa « méthode ».
io « méthode » io anefa tsy hay raha tsy tena mikatroka manao
« dissertation ».
A- FOMBA FANAOVANA « DISSERTATION
Ny zavatra hatao ao dia fanamarinana (justification),
fanaporofoana (preuve), fandresen-dahatra (argumentation) ary
fizohian-kevitra (raisonnement). Tsy maintsy hamarinina sy
porofoina ny zavatra rehetra lazaina, ny hevitra, ny fanohanankevitra (thèses). Tsy misy dikany ny zavatra lazaina maimaimpoana tsy voaporofo (les affirmations sans preuve valable ne
valent rien). Ny tanjona amin’ny « dissertation » dia handresy
lahatra ny mpitsara.
Tsy famerenana ny lesona nianarana velively
(question de cours) ny famaliana ny fanontaniana filôzôfika fa
famahàna olana miepetraka (examen d’un problème
philosophique). Tsy famerenana ny lesona ao anaty kahie no
atao ao fa fandinihanao samirery ireo fahalalalana rehetra azo
momba io lazadina (sujet) io. Tena tsy maintsy fandinihanao
samirery io. Ireo fahalalàna azo tamin’ny « cours » entina
hiatrehana ny lazadina fa tsy ireo lesona ireo indray no hadika.
Vao mipetraka ny Sujet dia izao eritreretina :
Hevitry ny mpandinika talohanao io apetraka hodinihina io
Ex : Hoy i Protagoras : « L’homme est la mesure de toute
Ny hijery izay marina amin’io sy izay diso amin’io no
andrasana aminao mpianatra raha hanao « dissertation » an’io.
Amin’ny 1ere Partie dia tadiavinao izay mahamarina
an’io hevitr’olona apetraka eo io. Izay lafiny mahamarina an’io
dia lazainao daholo.
Amin’ny 2ème Partie dia tsikerainao indray io hevitry
ny mpandinika taloha io. Tsy hoe ilay efa marina teo no lasa diso
indray fa tsy feno io, mila ampiana. Ireo rehetra ireo no
itsikeranao azy ato amin’ity fizaràna ity. Ohatra:Tsy feno / tsy
ampy anefa io fa hadinony fa…koa ny…fa tsy…fotsiny.
Amin’ny 3ème Partie: Ao no ilazanao izay ekenao sy
lavinao amin’io tenin’ny mpandinika taloha io sy ametrahanao
ny “solution” avy aminao.
1è Partie dia mipetraka eo amin’ny toeran’ny niteny
ilay “sujet” ianao, “avocat”. Resenao lahatra hino ny
fahamarinan’io “these” io ny “correcteur” mitsara ny “feuille”.
Tsy afaka manohitra na manampiditra ny hevitrao
manoloana an’io aloha ianao fa milaza fotsiny izay tokony ho
Marihina fa ny 2è &amp; 3è Partie dia hevitrao samirery no
Ity ny ohatra anazavana ny voalaza rehetra teo:
Hoy ny mpandinika: “La liberté est l’absence de contrainte”:
“Ny fahafahana dia ny tsy fisian’ny z avatra maneritery”.
Amin’ny 1ere Partie dia tadiavinao izay mahamarina an’io
hevitr’olona apetraka eo io. Izay lafiny mahamarina an’io dia
lazainao daholo. 1è Partie dia mipetraka eo amin’ny toeran’ny
niteny ilay “sujet” ianao, “avocat”. Resenao lahatra hino ny
Tsy afaka manohitra na manampiditra ny hevitrao manoloana
an’io aloha ianao fa milaza fotsiny izay tokony ho heviny.
HEVITRA HANAZAVANA AZY
Si on veut être libre, il faut supprimer toute contrainte, toute loi.
Raha te-ho afaka tsy misy maneritery tokoa dia tsy maintsy
Partie dia tsikerainao indray io hevitry ny
mpandinika taloha io. Tsy hoe ilay efa marina teo no lasa diso
Absence de contrainte supprime la libérté, entraine de
l’aliénation. Rehefa tsy misy ny zavatra manery dia amin’izay no
vao mainka tsy misy ny fahafahana satria manimba ny
fahafahana izany. Vao mainka indray aza voageja bebe kokoa.
Ohatra : Raha avela hanao ny tiany ny zaza fa tsy terena
hianatra dia andevozin’ny habadoana, andevozin’ny fitiavantena, izany hoe tsy olona afaka. Hadinony fa io fahafahana tsy
misy zavatra manery io dia tsy tena fahafahana.
Si on veut être libre, il faut de contraintes, des lois.
Mila zavatra manery vao afaka tena ho olona afaka. Mila lalàna
koa. Raha tsy misy manko ny lalàna dia korontana no misy fa tsy
misy ny fahafahana.
Ohatra : Raha samy manao ny tiany ny olona tsirairay ka ho
foanana izay rehetra mety ho maneritery (làlàna) satria te-ho
libre sy ho afaka dia tsy hisy mihitsy ny fahafahana. Raha tsy
misy lalàna mandrara ny halatra dia mahazo mangalatra ny olona
fa tsy teren’ny lalàna intsony. Raha tsy misy anefa ny lalàna dia
ny matanjaka sy ny be sandry no manjaka ka tsy manana
fahafahana handeha am-pilaminana miantsena intsony ny olona
fa matahotra ny mpangalatra. Izany no ilazana fa raha te-ho
afaka dia mila lalàna hanery ny rehetra hanara-dalàna amin’izay
dia milamina tsara ny fiaraha-monina. Rehefa teren’ny lalàna ny
rehetra dia libre ny tsirairay ary afaka mamokatra tsara tsy
matahotra mpangalatra na mpamono.
1è &amp; 2è Partie : Samy te-ho afaka ( être libre)
Problematique : Inona no atao mba ho tena afaka (satria samy
toa tsy feno ireo 1&amp;2 ireo). Ilaina ve ny faneriterena sa tsia ?
HEVITRY NY TENA : Ao amin’ny Synthèse (3è Partie) sy ny
Isaky ny fizàrana (par partie)
Hatanjahina tsara ny fanazavana handresy lahatra.
Dans laquelle le problème doit être posé clairement.
(Ao no ampahafantarana ny correcteur ny olàna ho vahaina). Tsy
maintsy efa hita ao amin’ny Introduction ireo thèse roa
Au cours duquel le problème doit être examiné
(exposer des thèses en présence et de leurs arguments. Et les
aussi solitionner en detail. Miezakamamahavaha ny olana
mipetraka, manazava, manaporofo.
Elle doit énoncer de manière explicite et brève au problème posé
dans l’introduction. Tokony ho hita ato amin’ny Conclusion fa
voavaha ilay olana nipetraka tao amin’ny Introduction. Apetraka
ao amin’ny Conclusion ( averina lazaina) ny vahaolana hita ao
amin’ny 3è partie fa tsy atao lava sahala amin’io fa lazaina fohy
ATAO AHOANA NY MANAO “INTRODUCTION”?
a)-Asiana tari-dresaka manodidina ny “sujet” aloha.
b)-Izany angamba no mahatonga an-DRanona miteny ny hoe
c)-Satria tokoa moa(mantsy)…ka tsy tokony ho…ve? En effet...
d)-Kanefa koa.... Cependant...
e)-Noho izany tsy tokony ho...ve? Ainsi …
ny famaliana misesy ireo fanontaniana mipetraka ireo no
hiezahana hamahana io olana apetraky ny laza adina io. (C’est en
répondant respectivement à ces questions que nous allons tâcher
de résoudre le problème)
Ao amin’ny c)- sy d)- dia ny fihevitry ny olona tsotra
andavanandro ireny no atao ao ny fihaviny.
Efa PLAN io no sady petrak’olana (problematique). Anatin’io
Plan io no ametrahana ny olana ho vahaina. Tsy misy zavatra
anampiana an’ireo intsony fa io somary fanontaniana io izany
MBA HO TSARA NY DISSERTATION
1a)-Fantarina ny dikan’ny teny tsirairay amin’ny laza adina
Liberté et contrainte sont-elles compatibles ? Afa-miaraka ve ny
faneriterena sy ny fahafahana.
Liberté ? Inona ny dikany ? : Fahafahana tsy fisian’ny zavatra
Contrainte ? Inona no dikany ? Faneriterena avy ety ivelan’ny
Compatibles ? Inona no dikany ? : Miaraka tsy misaraka fa sady
libre no voateritery, sady voateritery no libre.
b)-Inona indray no dikany fahazoanao io laza adina io ?
Ny fahazoako io laza adina io dia mangataka ahy hilaza raha toa
ka mety ny hiarahan’ny faneriterena sy ny fahafahana izany hoe
na misy aza ny faneriterena dia tsy misaka tsy ho afaka, ary koa
na eo aza ny fahafahana tsy maintsy misy ihany ny faneriterena.
2- Tadiavina daholo ny hevitra rehetra ho entina manazava io
laza adina io, avy eo fidina izay hevitra mahazava azy,
atambatambatra izay mitovitovy dia manome hevitra iray.
Fantenana koa izay tsy ilaina satria hita ho maivana. Alahatra
avy eo izay holazaina voalohany, faharoa, fahatelo.
3-Atsangana ny Plan (drafitry) ny asanao. Horesahina voalohany
ary ny… avy eo ny… ary farany ny…
1-Liberté est sont icompatibles: Sarotra be ny hiarahan’ny
fahafahana sy ny zavatra maneritery.
a)-Raha misy ny maneritery (lalàna, disciplines) dia tsy misy ny
fahafahana(tsy libre). Raha tsy misy kosa ny zavatra manery
(lalàna, discipline) dia misy ny fahafahana satria mahazo manao
Hohazavaina lavalava aloha izay
Ohatra anazavana azy: Tsy avela hanao an’izao ny olona
iray…Tsy libre izy amin’izany satria tsy avela (noho io lalàna
manery io). Raha avela hanao izay tiany ary tsy sakanana
amin’izany kosa izy dia olona afaka manana fahafahana.
Manamarina izany ny tenin-DRanona milaza hoe:
2-Raha tsy misy ny zavatra manery (lalàna sy disciplines) dia
tena tsy hisy koa ny liberté.
Ohatra anazavana azy: Raha samy mahazo manao izay tiany
daholo ny rehetra fa tsy misy lalàna mandrara hoe ny ... tsy azo
atao dia hanjaka ny halatra isan-karazany dia vao mainka tsy
misy ny fahafahana satria ny matanjaka no manjaka.
3- Discipline et liberté sont compatible. Afa-miaraka ny zavatra
manery sy ny liberté. Rehefa teren’ny lalàna hanao ny marina sy
ny tsara ary terena tsy hanao ny ratsy ny olona dia milamina ny
fiaraha-monina ka afaka mamokatra, afaka mandry ivohom-bato.
Hazavaina tsara amin’izay fa ny liberté resahina ao amin’ny 1 sy
2 ireo dia liberté tsy tena izy. Ny tena fahafahana dia tsy maintsy
manaiky ny fisian’ny lalàna izay manery hanao ny tsara sy tsy
hanao ny ratsy.
Teny famaranana: Ny hevitra holazaina ato dia ny ao amin’ny 3
io ihany hoe: discipline et liberté sont compatible. Fintininao
tsotra dia tsotra io 3ème partie io fa tsy mila zavatra lava intsony
Ohatra ho an’ny INTRODUCTION :
Tout le monde a soif de liberté mais cette soif se
heurte aux disciplines qui sont nécessaires dans toutes sociétés.
C’EST POURQUOI (Izany no antony) on demande si disciplines
et liberté peuvent aller ensemble. EN EFFET (Satria tokoa
manko) si la liberté se définie par l’absence de toute contrainte,
ne faudrait-il pas supprimer les disciplines pour être libre ?
CEPENDANT (Kanefa indray) si on supprime les disciplines,
l’homme ne serait-il pas de plus en plus privé de sa liberté à
cause de la loi du plus fort ? AINSI (raha izany ary no izy) les
disciplines ne sont-elles pas nécessaires pour être libre ?
COMMENT ALORS CONCILIER CES DEUX NOTIONS QUI
SEMBLENT CONTRADICTOIRES ? C’est en répondant
respectivement à ces questions que nous allons essayer de
4- Rehefa manao azy amin’ny BAC dia ataovy voalohany
indrindra ny fanaovana ny INTRODUCTION.
5-rehefa manao ny corps du devoir aza mandika amin’ny
brouillon fa ataovy mivzntznz zmin’ny taratasim-panadinana.
Ampy ho brouillon ny fanaovana ny Plan ao. Ataovy tsara
fotsiny ny fampitohizana azy mba hirindra tsara. Asio tetezamita
tena mampifandray ny hevitra eo aloha sy ny any afarany. Azo
apetraka amin’ny faran’ny paragraphe eo aloha ny tetezamita
(transition) na amin’ny fanombohan’ilay paragraphe manaraka.
Anjaranao ny misafidy.
6-Isaky ny paragraphe dia tsy maintsy ahitana teny fampidirana
kely izay vao manazava, misy ohatra koa anaporofoana azy ary
asiana « citation ». Avy eo asiana teny « conclusion » kely (une
phrase) hamehy ny hevitra nohazavaina tao. Hevitra iray ihany
no hazavaina amin’ny paragraphe iray.
7- Tsy maintsy asiana ohatra mandrakariva anazavana azy. Ny
ohatra miaraka amin’ny hevitra. Ny hevitra miaraka amana
8-Ezaho ho fohy ny fanazavan saingy mandresy lahatra. Raha
lava ny fanazavanao dia tsy hita ny hevi-dehibe. Raha fohy anefa
dia ho hita ary handresy lahatra avy hatrany. Diniho fa raha
hanamboatra jus amin’ireny Superdip ireny ianao. Maka
superdip iray fonosana: Raha rano iray siô no asianao azy dia
hatsatso izy, tsy ho re hatramin’ny fofona superdip intsony aza.
Raha ohatra kosa ka rano iray litatra no asinao azy dia minoa ahy
fa hon re ny tsiro tadiavina ao. Toy izany koa ny hevitra rehefa
manao dissertation. Na hevitra mitovy izao aza (1 sachet de
superdip) dia samihafa ny tsirony. Izay fohy mandresy lmahatra
sy tsara fa izay lava resaka kosa very any ny tena hevitra na dia
ao dia ao aza.
9-Satria efa fantatra mialoha ny valin-teninao amin’ny sujet iny
rehefa vita amin’ny brouillon ny Plan, tonga dia adikao madio
amin’ny brouillon ny conclusion amin’izay mandika fotsiny
rehefa vita ny fandikana mivantanana ny developpement.
10-Vakio milamina tsara amin’izay ny asanao sao misy diso
tsipelina, dia atero.
Tel : 034 39 212 41
METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel.pdf (PDF, 767 Ko)
liberte dissertation hevitra ohatra tsara libre satria partie zavatra afaka izany lalana olona fahafahana rehetra
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00500717.